Ogaden News Agency (ONA) – Wafti kasocda Midowga Yurub oo gaadhay Ethiopia iyo qorshayaal badan oo fashilmay oo laguso saaray wargeyska Guardian
Wafti kasocda Midowga Yurub oo gaadhay Ethiopia iyo qorshayaal badan oo fashilmay oo laguso saaray wargeyska Guardian
Wafti ka socda Midowga Yurub ayaa booqasho kormeer ah ku tagay wadanka Ethiopia si ay usoo baadhaan tacadiyada kajira ee haayadaha xuquuql insaanku soo saareen iyo dadka kasoo qaxay xasuuqa Ethiopia ee kusugan xeryaha qaxootiga.
Waftigan ayaa qorshahoodu ahaa oo kale inay baadhitaano kusameyaan lacagaha deeqda ah ee lasiiyo Ethiopia in sidii loogu talogalay loo isticmaalay iyo inkale. Hadaba gumeysiga Ethiopia ayaa sida la filayay hor istaagay diblomaasiyiiinti kasocday Midowga Yurub oo u diiday inay soo arkaan Jeelasha waaweyn ee dadka lagu ciqaabo sida Jeel Ogaden iyo Jeelka Kaliti ee Addis Ababa ku yaala. Waxaa kale oo loo diiday booqashadooda inay si xor ah ku sameyaan iyada oo meelo cayiman oo loo sii diyaariyay la geeyay.
Warar hoose oo aan ka helnay gudaha ayaa naloogu sheegay wufuudan ree galbeedka loo jilay ruwayado oo dad la diyaariyay oo muddo laga shaqeyanayay lasoo tusay kuwaas oo u aqriyay sheekoyin aan waxba ka jirin.
Sikasta ha ahaate Wargeyska weyn ee kasoo baxa wadanka Ingiriiska ee lagu magacabo The Guardian ayaa maanta soo saaray warbixin aad u dheer oo lagu dhaleecaynayo Bangiga Aduunka (World Bank) iyo haayada dowliga ah ee mucawamada siisa wadamada soo koraya ee UK (DFID) oo lagu eedeyay inay ka danbeeyaan lacagaha lasiiyo Dowlada Ethiopia si ay u meel mariyaan qorshaha lagubaro kiciyay boqolaal kun oo qoys oo dibu dajin lagu sameeyay meelo aan aheyn dhulki ay horey u daganayeen.
Wargeyska ayaa soo saaray warbixin dheer oo kawaramaysa qaabka dibudajintan lagusameyay iyada oo dad badan guryahoodi iyo beerahoodi laga soo qixiyay kadibna la dajiyay goobo aan waxba ka bixin, tuuloyinkan cusub ee loo sameeyay malaha Iskuulo iyo goobo caafimaad toona sidoo kale dadkan ma heystaan cuno ay cunaan. dadka ayaa guryahodi iyo beerahoodi laga soo qixiyay waqti dalagu u go’ayay arrintaas oo lamicno ah in dadkan gaajo u dhintaan. Dadkii is adkeeya ee diidaay inay guuraan waxaa laga dhigay dad la dilay, ama xabsi loo taxaabo iyo dad xoog lagu soo raro kadib markii jidh dil lagu sameeyay.
Bangiga Adduunka oo qorshahan Dowlada Ethiopia ku taagerayay laga soo bilaabo sanadkii 2006 isaga oo ugu deeqay lacago dhan $2 billion ayaa dib ugu noqonaya qorshihiisaas islamarkaasna waxaa World bank uu sheegay innuu wado baadhitaano uu ku oggaanayo arrimahan. Waxaa lafilayay in kulanka World bank uu dhaco salaasadi shalayto aheyd balse balanti kulanka ayaa dib loo dhigay sidaas waxaa qoray Wargeyska The Guardian.
Qorshahan Dibu dajinta waxa uu ka jira goobo badan oo Ethiopia ah, sidoo kale waxaa laga fuliyay dhulka Ogadeniya iyaga oo dadkii ree guuraga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa intii laga baa bi’yay geeli, adhigi iyo lo’di ay dhaqan jireen xoog looga dhigay dad daggaan ah oo lagu amray inay beertan dhul beereed aan waxba ka baxayn. Dadkaas ayaa waxyaalaha beerta lagu yiri waxaa kamid ah xabuub, basal iyo khudaar u baahan biyo badan iyo dhul dihin oo beer ku wanaagsan. dadkan ayaa intooda badan ku jiraan macaluul maadama aysan haysan wax cuno ah iyo lacag ay kusoo gadan karaan. Sidoo kale ma heystaan xoolihi noola ee hilibkooda qalan jireen ama caanahooda ay cabi jireen. arrintan oo sameysay inkabadan 150,000 qoys (boqol iyo kontan kun oo qoys) oo kamid ah somalida Ogadeniya kuwaas oo hal mar laga raray dhulkoodi nolol aysan waligood horey u aragna lagu qasbay.
Qorshan ay Ethiopia wado ayaa laba u jeedo laga leeyahay.
midka kowaad oo ah in Dadka Ogadeniya laga dhigo dad dhaqankooda laga badalo oo ree guranimada laga saaro lagana dhigo dad degaan ah si gumeysiga Ethiopia u helo awood uu ku maamulo dadka miyiga dagan oo shacabka ogadeniya 80% ah tirada populationka. Kadib waxa gumeysigu rabaa inuu dhulka Ogadeniya ama dhul hoosaadkaa (law Land Ethiopia) in lagu beero qowmiyadaha Kiristaanka ah oo lasoo dajiyo dhulkaas.
Qorshaah kale ee laga rabo waxaa weeye in dhulka Ogadeniya iyo guud ahaanba Lawlandka Ethiopia in laga gado shirkado shisheeye oo lacag ay ka qaataan taliska TPLF.
Si kasta ha noqote qorshihi gumeysiga uu rabay waxa uu ka hirgalay meelo badan oo Ethiopia kamid ah balse illaa hada si buuxda waa ugu guuleysan waayeen in dhulka Ogadeniya looga hirgaliyo. Waxaa kale oo fashilmay qorshahan oo Lacago badan looga qaatay wadamada Ree galbeedka kadib markii warbaahinta caalamka iyo Haayadaha Xuquuqul insaanku ay soo bandhigeen tacadiyada iyo ujeedada ka danbeysa ee qorshahan.
Kala Soco ONA waxii kasoo kordha barnaamijkan oo hada ka horna dhowr maqaal idinkasoo diyaarinay.